प्रबास/समाज – Nepali News नेपाली समाचार
गायिका सरला राई को "मोह"
अमेरिका । एनआरएनए अमेरिका का अध्यक्ष डा केशव पौडेलको उपस्थितिमा यहि एप्रिल २९ तारिख शनिवारका दिन वासिंटन राज्यको सियाटलमा एनआरएनए अमेरिकाको च्याप्टर गठन गरिएको छ । एन अार एन अमेरिकाको अासन्न निर्वाचनलाई अझ समावेशी बनाउने क्रममा शनिवार वाशिङटन राज्यको सियाटलमा तदर्थ समिति गठनका लागि फोकल व्यक्तिको रुपमा डा नबिन खनाल लाई नियुक्त गरेको छ >>>
लन्डन । आयरल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले बिहीबार आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । राजदूत डा. सुवेदीले डब्लिनस्थित राष्ट्रपतिय दरबारमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच आयरल्याण्डका राष्ट्रपति माइकल डि हिगिन्स्समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन् । डा. सुवेदी बेलायतका लागि नेपाली राजदूत समेत हुन् । उक्त अवसरमा राजदूत सुवेदीले नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी >>>
रत्ननगर, १४ वैशाख । पुर्वी चितवनको रत्ननगर पिठुवा घर भई लामो समयदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनु भएका पत्रकार, गीतकार एवम् गजलकार नृपेश उप्रेतीले गामवेशीको संरक्षण केन्द्रलाई रु. २५,०००।– सहयोग गर्नुभएको छ । पत्रकार उप्रेतीले आफ्नो गीति एल्बम ‘आहान अर्को खुशी’ को विक्रीबाट संकलित रकम पत्रकार रवि रोशी मार्फत केन्द्रमा पठाउनु भएको हो । उप्रेतीले आफ्नो गजल >>>
हेम चन्द्र राई,दुबई । वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य दुबईमा सुरक्षा गार्ड नयाँ व्यवस्था अनुसार तलबवृद्धि हुने भएको छ । अब नयाँ नियम अनुसार बेसिक तलब वृद्धि गर्न लागिएको हो । हाल प्राप्त १२०० दिराम बेसिक तलब १४४० देखि १९२० दिराम हुनेछ । जसको लागि सेकुरिटी गार्डले नयाँ प्रशिक्षण समेत लिनुपर्ने इमिरेट सुरक्षा उद्योग नियामक प्राधिकरण >>>
राजु सुब्बा,बेलायत । गत २२ अप्रिल २०१७ का दिन नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, (फोनिज) युकेको एकदिने गोष्ठि एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । पत्रकार नरेश खपाङ्गीले आधारभूत पत्रकारिता र युकेमा नेपाली पत्रकारिता विषयक प्रशिक्षण दिनुभयो भने सिनियर पत्रकार सोनाम छिरिङ शेर्पाले रेडियो पत्रकारितामा हासिल गरेको अनुभव बाड्नु भयो । त्यस्तै गरि आमन्त्रित केन्ट्रीस >>>